Samuel Eto’o: “Xidiga garoonka Messi iyo hazard ma noqon doonaan waxaa noqon doona Madaxweyne Erdoğan” – Gool FM
Samuel Eto’o: “Xidiga garoonka Messi iyo hazard ma noqon doonaan waxaa noqon doona Madaxweyne Erdoğan”
Nasro Kiin July 15, 2016
Waxaa tan iyo duhurnimadii maantay si isdaba jog ah u soo gaarayay magaalada Antalya ee Dalka Turkiga cayaartooyda iyo madaxda kale ee ka qeyb galaysa cayaarta adag ee habeen dambe ku dhex mari doonta garoonka Antalya laba koox oo laga sameeyaya Cayaartooyda aduunka iyo kuwa Turkig taasoo uu soo abaabulay ciyaaryahan Samuel Eto`o.
Kulankaan oo Sadaqo loogu aruurinayo Dadka saboolkaa looguna magacdaray cayaarta caawinta Eto`o ayaa loogu dabaal dagayaa sidoo kale 10 sano guuradii ka soo wareegtay markii la Unkay Hay`ada Caawinaada Samuel Eto`o.
Xiddigo ay kamid yihiin Carlos Puyol Eden Hazard Michael Essien Kole Toure Golhayihii reer England James ,Marcel Desially Tababare Fabio Capello iyo kuwa kaloo badan ayaa maanta soo Caga dhigtay magaalada Antalya si ay qeyb uga noqdaan kulankaan iyagoo ka tirsan safka uu hogaamin doono Eto`o ee World starska sidoo kalan la sugayo laacibiin uu ka mid yahay Lionel Messi iyo Macalin Jose Mourinho.
Dhanka kale waxaa kulankaan dhici doona habeen dambe dhadhanka u yeelaya Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo qeyb ka ah cayaarta isagoo hogaamin doona dhanka cayaartooyda wadanka Turkiga .
Samuel Eto`o oo wareysi bixiyay maqribkii ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay cayaarta uu iskaga horkeenayo labadaan koox sidoo kalana uu filayo in ay dhaqaalo badan ka soo xarooto,asagoo hadalka sii wata mar la weydiiyaya cida kulanka bilaysa ayuu yiri “Xiddiga garoonka maahan Messi iyo Hazard balse waa Madaxweyne Erdogan oo la hubo inuu taageero xoogan ku leeyahay wadankiisa”.
RASMI: Kooxda Juventus oo ku dhawaaqday saxiixa Medhi Benatia
Carlos Bacca oo iska diiday dalab uga yimid West Ham… (Miyuu ku biirayaa Arsenal ama Atletico Madrid?)